Skrill Deposit ငွေအိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေး | စတော့အိတ်အွန်လိုင်း Investing - တစ်ဦးအပ်ငွေ Make ရန်ကဘယ်လို
ကျွန်တော်တို့ကို Watch အပ်ငွေ, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေးကနေရီးရဲလ်ကုန်သွယ်ရေးနှင့် Withdrawal အနိုင်ရမည်ဟု - Skrill အားဖြင့် powered ပလက်ဖောင်းစစ်ဆေးမှုများ
Skrill ၏တစျခုဖွစျသညျ eWallets တစ်ဦးကိုလက်ခံပေးချေမှုနည်းလမ်းအဖြစ်အများဆုံးအွန်လိုင်း binary options များပွဲစားများစာရင်းဖြစ်သည်။
ရန်ရန်ပုံငွေသို့ပေးသွင်းရမည်နှင့်သင့်အိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်မှထုတ်ယူစေ Skrill သုံးပြီးဖို့အများကြီးအားသာချက်များရှိပါသည်။
Skrill ထွက်မတ်တပ်ရပ်စေသည်နောက်ထပ် feature ကိုသူတို့သာအခကြေးငွေ၌သင်တို့၏သိုက်ပမာဏ၏ 1% ကောက်ခံပါမယ်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
ဤသည် 2.5% ၏အထက်သို့အားသွင်းမည်သူအများဆုံးငွေပေးချေမှုပရိုဆက်ဆာထက်နိမ့်သည်။
ယခုငါသင်ဤတတ်နိုင်သမျှလုပ်ယူသငျ့သညျအဘယျသို့ခြေလှမ်းများ, သင်အိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်ပိုက်ဆံငွေသွင်းဖို့ Skrill ကိုအသုံးပြုသင့်ပါတယ်ဘာကြောင့်အကြောင်းပြချက်တွေပေးထားတော့သလော
သင်တစ်ဦး Skrill အကောင့်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဆိုလျှင်, တဦးတည်းဖွင့်လှစ်ရန်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ။
1 ။ သင့်ရဲ့အိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်ကို Log ။ သငျသညျပြီးသားတဦးတည်းရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဆိုရငျ, အခမဲ့အရောင်းအဝယ်ဖြစ်စတင်ရန်တစ်သရုပ်ပြအကောင့်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် $ 10000 ရဖို့ဒီမှာနှိပ်ပါ!
2 ။ သင်၏ကုန်သွယ်မျက်နှာပြင်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းညာဖက်မှာ button ကို '' တစ်ဦးအပ်ငွေ Make '' ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။ ဒါဟာငွေပေးချေမှုစာမျက်နှာရန်သင့်အားပြန်လည်ရည်ညွှန်းသည်။
3 ။ ကို 'အီလက်ထရောနစ်ငွေပေးချေမှုစနစ်များကို' 'ပုဒ်မအောက်ရှိ' 'Skrill' 'လိုဂိုပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။
4 ။ သင်သည်သင်၏ Skrill အကောင့်ကို အသုံးပြု. ငွေသွင်းလိုသောငွေပမာဏကိုရွေးချယ်ပါ။
အပိုဆုကသင်၏သိုက်အပေါ်သို့မဟုတ်မရရန် option ကိုလည်းရှိပါတယ်။ သင်တစ်ဦးဆုကြေးငွေခံယူချင်ကြပါဘူးလျှင် '' ဆုကြေးငွေ '' option ကို uncheck လုပ်ပါ။
သင်ဆဲထားတဲ့အိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေးဆုကြေးငွေလိုလျှင် check လုပ်ထားထို option ကိုစွန့်ခွာ။ အောက်ခြေမှာကို 'အပ်ငွေ' ခလုတ်ကိုပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။
5 ။ သင်က Skrill က်ဘ်ဆိုက်မှ redirected လိမ့်မည်။ သင့်အကောင့်ထဲကိုဝင်ရောက်ဖို့သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့် password ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
6 ။ သင်ရဲ့ login button ကို click ပြီးတာနဲ့ Skrill (သင်သင့်အကောင့်ကိုဖွင့်သည့်အခါထုတ်ပေး) တစ်ဦးလုံခွုံရေးတိုကုဒ်အဘို့ကိုတောင်းဆိုပါလိမ့်မယ်။
ဤသည်သင့်အကောင့်လုံခြုံရေးပိုအလွှာပေးထားပါတယ်။ code ကိုရိုက်ထည့်ပါထို့နောက်ငွေပေးချေမှုငွေပေးငွေယူဖြည့်စွက်။ သင့်ရဲ့သိုက်မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းသင့်ရဲ့အိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်ထဲမှာထင်ဟပ်သငျ့သညျ။
Tags: သိုက်အိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေး, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုအတွက်ပိုက်ဆံငွေသွင်းဖို့ဘယ်လို, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေးငွေသွင်းဖို့ဘယ်လို, ကုန်သွယ်ရေးအိုလံပစ်မှငွေသွင်းဖို့ဘယ်လို, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေးအပေါ်တစ်ဦးသိုက်အောင်ဘယ်လို, နိမ့်ဆုံးသိုက်အိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေး, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုသိုက်ဆုကြေးငွေ, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုသိုက်နည်းလမ်းများ, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုသိုက် option ကို, ငွေသွင်းဖို့ဘယ်လိုကုန်သွယ်မှုအိုလံပစ်, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုနိမ့်ဆုံးသိုက်, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှု Skrill